आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक १४ गते। बुधबार। – AstroSimara.Com
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक १४ गते। बुधबार।
By Astro Sudeep Dhakal	 On Oct 30, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर ३१ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष। तिथि– सप्तमी, ११:५९ बजेउप्रान्त अष्टमी। नक्षत्र– तिष्य, २७:५९ बजेउप्रान्त अश्लेषा। योग– साध्य, १६:५१ बजेउप्रान्त शुभ। करण– वव, ११:५९ बजेदेखि वालव, २२:४८ बजेउप्रान्त कौलव। आनन्दादिमा मातंग योग। चन्द्रराशि– कर्कट। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:१४ बजे, सूर्यास्त– १७:१९ बजे र दिनमान २७ घडी ४२ पला। अष्टमी व्रत। गोरखकाली पूजा।
आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। आर्थिक सुधार निश्चित छ। मित्रहरू सहयोगी र अत्यधिक मद्दतगार हुनेछन्। तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्। नयाँ उद्यमले लोभ्याउँछन् र राम्रो लाभको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ। हो, तपाईंको जोडी त्यो जीवनसाथी हो।
काममा र घरमा केही दबाव पर्नाले तपाईंलाई छिट्टै रिसाउने बनाउँछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। तनाउको समय हुन सक्छ तर परिवारको समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। कसैको लागि बिहेको बाजा र कसैले आफुलाई ठूलो सोखमा राख्ने रोमान्स पाउनुहुनेछ। आज तपाईंलाई काममा राम्रो समाचार प्राप्त हुन सक्छ। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। रोमान्स रोमाञ्चक हुनेछ – त्यसैले तपाईंलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र दिनलाई उत्तम बनाउनुहोस्। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
मित्रबाट गरिएको एउटा विशेष प्रशंसा तपाईंका आनन्दको स्रोत हुनेछ। यसको कारण के हो भने तपाईंले ती जीवनजस्ता रूखहरू खडा गर्नुभएको छ जसले अरूलाई छाया दिन आफु खडा भएर प्रचण्ड गर्मी सहन गर्दछन्। आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। भेटघाटको मिति कार्यक्रम असफल हुन सक्ने हुनाले निराशाको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। आफ्ना क्यारियर सम्बन्धित निर्णयहरू आफैं गर्नुहोस् र तपाईंलाई लाभ हुनेछ। तपाईं आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सामानको अतिरिक्त हेरचाह गर्न आवश्यक छ। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
मुश्किल स्थितिको सामना गर्दा तपाईं दुखी नहुनुहोस्। खानाले आफ्नो स्वादको लागि नूनको ऋण लिएको हुन्छ – केही दुखको आवश्यकता पर्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा दास जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्। आफ्नो कौशल देखाउन अवसर आज तपाईंसँग हुनेछ। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। दिनमा आफ्नो जोडीसित तपाईंको तर्क हुन सक्छ, तर यो आज राती खानाको समयमा समाधान हुनेछ।
तपाईंको विनम्र व्यवहारको सराहना गरिनेछ। धेरै मानिसहरूले तपाईंको मौखिक रूपमा प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईंले केही अतिरिक्त पैसा बनाउने तरिकाहरू खोजिरहनु भएको छ भने सुरक्षित वित्तीय योजनाहरुमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी पार्न जति गरेपनि – तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू तपाईंसँग धेरै खुसी रहने छैनन्। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि सही दिन। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभाव कामका कुराहरू मिलाउने विषयमा लगाउनु आवश्यक छ। यात्रा सुखद र अत्यधिक लाभदायक हुनेछ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
तपाईंको व्यक्तिगत समस्याले मानसिक आनन्द बर्बाद गर्न सक्छ तर आफैलाई यी दबाबबाट बचाउनको लागि रोचक कुराहरू पढेर केही मानसिक व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ – त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसँग जीवनको सबैभन्दा राम्रो साँझ बिताउन पाउनु हुनेछ।
जीवनलाई खेलाँची नसोच्नुहोस्, जीवनको हेरचाह गर्नु वास्तविक भाकल हो भनेर महसुस गर्नुहोस्। सफलताको लागि आजको सूत्र नवीन विचारधारा र राम्रो अनुभव भएका मानिसहरूको सल्लाहमा आफ्नो पैसा राख्नु हो। आफ्नो सामाजिक जीवनलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट केही समय निकाल्नुहोस् र आफ्नो परिवारसँग पार्टीमा जानुहोस्। यसले तपाईंको दबाब मात्रलाई राहत दिंदैन, हिचकिचाहट पनि हटाउँछ। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्।।।
आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तपाईंका साथीहरूलाई आफ्नो उदार स्वभावको फाइदा नदिनुहोस्। आफ्नो प्रियसँग वनभोजमा गएर आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्। काममा र घरमा हुने दबावले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
राम्रो जीवनको लागि आफ्नो स्वास्थ्य र समग्र व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो। तपाईंको सहयोगी मनोवृत्ति र विश्लेषणात्मक कौशललाई याद गरिनेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक १३ गते। मंगलबार।